होटल समिटमा श्रमिकहरुको तलव रु. २४५० ले वृद्धि - Majdoor Online
होटल समिटमा श्रमिकहरुको तलव रु. २४५० ले वृद्धि
अखिल नेपाल होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुराँमजदुर संघ र नेपाल स्वतन्त्रहोटल,क्यासिनो तथा रेष्टुरेण्ट मजदुर यूनियन एक आपसमा सहमत भई अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघको केन्द्रिय सदस्य लीलाकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरि श्रमिकहरुको तर्फवाट व्यापार प्रवद्र्धन, आर्थिक र सामाजिक सुरक्षामा सम्वन्धित विषयहरुमा २० वुँदे माग प्रस्तुत गरेको थियो । सामूहिक सौदावाजीको प्रकृया अनुसार व्यवस्थापन र युनियनवीच भएको वहश र छलफल तलव र सुविधा वृद्धिसंगै सौहाद्रपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको छ ।
पटक पटकको अनौपचारिक र ५ पटकको औपचारिक वार्तावाट २०७४ साल चैत्र १९ गतेका दिन दुवै पक्ष सहमतभई हस्ताक्षर कार्यक्रम समेत सम्पन्न भयो ।
जनवरी १ देखि नै लागु हुनेगरी श्रमिकहरुले खाईपाई आएको आधारभुत तलवमा रु १४०० र महंगी भत्तामा १०५० गरि २४५० श्रमिकहरुको तलव वृद्धि भयो । सामूहिक सौदावाजीमा आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाको समेत माग सम्वोधन भएको कुरा लिलाकुमार श्रेष्ठले स्पष्ट पारेका छन् ।
Previous: राजनीतिसंग गाँसिएको हाम्रो परिवेश– आमोद श्रेष्ठ
Next: मई दिवसको मुखैमा अन्टुफले श्रममन्त्रीलाई मागपत्र बुझाउँदै